Samsung Galaxy Note 7 ga-ebu ọdụ ụgbọ USB-C | Akụkọ akụrụngwa
Samsung Galaxy Note 7 ga-enwe ọdụ ụgbọ USB-C
Ruo taa, mgbe ụbọchị ole na ole fọdụrụ maka ngosi nke 7 Galaxy Note, nke ga-adị na August 2 dị ka anyị gwara gị ụbọchị ole na ole gara aga, anyị nwere ike ịsị na anyị maara nkọwa niile nkọwa ọhụrụ a nke na Samsung phablet ga-enwe ma ọ bụrụ na anyị emee banyere asịrị niile e bipụtara. Site na ihe rue taa anyị enwebeghị ihe akaebe ma ọ bụ ozi iji gosi ma ọ bụ ịgọnahụ ụdị njikọ ahụ, anyị nwetara vidiyo sitere na Vietnam nke anyị nwere ike ịhụ nke ahụ ihe Galaxy Note 7 ga-enwe njikọ USB-C, kama nke USB njikọ ọdịnala nke ọtụtụ ọdụ na ahịa nwere, ma ọ bụrụ na ọ bụghị ha niile.
Ọ bụghị naanị na anyị ruru nkwubi okwu a site na vidiyo a, kama anyị bịakwara ná nkwubi okwu, site na ọkwa nke ụdị ọhụụ nke iko Gear VR nke bụ eziokwu, na ga-ejikwa ụdị njikọ USB-C kụrụ ahịa ahụ kama njikọ micro-USB ejiri ruo ugbu a.
Na vidiyo anyị nwere ike ịhụ ụzọ ụzọ atọ dị iche iche. Ezubere otu n'ime ha maka Lumia 950, ebe eriri abụọ ndị ọzọ na-acha ọcha bụ Samsung rụpụtara n'ụlọ ọrụ ya na Vietnam, nke anyị na-ahụ njikọ USB nkịtị na Typedị-C ọzọ. Ọ bụrụ na anyị elee anya na ụdị Type-C ahụ, anyị nwere ike ịhụ ọnụọgụ N930 edere, nọmba ụdị ahụ metụtara Galaxy Note 7 ka a ga-ekpughere ya n'ime izu abụọ.
Njikọ USB-C na-enye anyị ohere ịnyefe data ngwa ngwa karịa nke ugbu a, na mgbakwunye na ikwe ka a na-ebufe vidiyo na ọdịyo ọnụ. Isi omume nke njikọ a bụ na ọ na-agbanwegharị, yabụ na anyị ekwesịghị ị attentiona ntị mgbe anyị na-ejikọta ya, n'ihi na anyị na-agbanye ya ka anyị na-etinye ya, ọ ga-abanye na ngwaọrụ ahụ mgbe niile. Dị ka European Union si kwuo, ụdị njikọ a ga-abụ iwu maka ngwaọrụ niile dabara na ahịa n'afọ ọzọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Samsung Galaxy Note 7 ga-enwe ọdụ ụgbọ USB-C
Laptọọpụ Xiaomi ga-agafe Macbook Ikuku
Ndị HP Elite X3 na Europe ma tụọ aka na US